Ukudla kufanele kube khona wonke umuntu ithanga. Lokhu yemifino ngezithako zawo has ukulandelela izakhi ukuthi inenzuzo umzimba wonke. Ngakho-ke, Amalungiselelo ebusika ka wathi umkhiqizo kufanele enze wonke owesifazane. Kungaba ayo, sezimoto, ukudla okulula, izithelo candied nokuningi. Isihloko akhethiwe zokupheka ezihlukahlukene izitsha ithanga, okuyinto ungakwazi silungiselele ikusasa. Funda kubo bese uthatha inothi engqondo.
Ukwelapha ithanga juice
Ezivuthiwe ithanga ikhasi, uthathe tincetu futhi udabula juicer. I kwaphumela juice ngamathumba ushukela (ukunambitha noma kungekho) 5-10 imizuzu. Khona-ke, hot uthele ehlanzekile, eyomile ingilazi iziqukathi, ikhava bese abilayo cishe isigamu sehora. Amabhange qinisa futhi ushiye kuphole, zihambisana kubo ngengubo. Gcina ijusi emiphongolweni.
Amalungiselelo kusuka ithanga ebusika. ujamu iresiphi
Kilogram kuhlanzwe futhi ithanga Diced ukugcwalisa ushukela (0.6 kg) futhi ushiye ubusuku. Ubani ukuyeka ekuseni sokukhipha ijusi, engeza iphawundi ushukela thumba imizuzu eyishumi. Khona-ke abeke izingcezu isiraphu, ithanga uhlanganise kahle. Yonke inhlama ukuba ubilise imizuzu emihlanu. Khona-ke uvala ekushiseni bese ushiye amahora 5-6 yokuvuna. Nge Lemon ukususa ikhasi, nquma it, enezele le jam. Ibila kuze kube uqweqwe uswidi, phezu ukushisa low, ibangele njalo. Egcinwe lokhu preform endaweni iziqukathi oyinyumba stoppered kuphole.
Yini enye kusimangaze nazo ithanga? Amalungiselelo ebusika smoothie okumnandi
Izingcezu ithanga sibeke epanini nge ngezansi obukhulu. Engeza amanzi kancane bese upheka kuze isisindo, kuze imifino bancane. Ngaphezu kwalokho Sula preform ngokusebenzisa ngesihlungo noma eyothando esebenzisa blender. Ngo eziningi ithanga, ushukela ukunambitha, usinamoni, ezisawolintshi ikhasi. Ubilise ecubuziwe imizuzu engaba yishumi kanye zakuporte izimbiza oyinyumba. Ilondolozwe Kahle ukuvunwa ezinjalo kahle esiqandisini noma emiphongolweni.
ithanga ezakhiwe kusengaphambili: Amalungiselelo ebusika. iresiphi appetizer utamatisi
Anyanisi - 5 yizicucu;
garlic - 1 ikhanda;
ithanga - 1 kg;
utamatisi - iphawundi;
Qoba anyanisi bese Fry kamnandi uwoyela. Engeza ithanga, uthathe cubes futhi kuphekeke. Okulandelayo ukwethula imifino nesweli kanye nezinongo. Sika utamatisi zibe tincetu, futhi ukuthumela in a mass sikadali zemifino. Salt isidlo ukunambitha kanye ibila kuze kuphele isigamu sehora on ukushisa low. Lapho ukuziqalela usulungile, wayendlala phezu amabhange, amboze zamabhodlela bese abilayo imizuzu engu-20. Zakuporte esitsheni futhi ushiye kuphole ngaphansi kwengubo yokulala. Lokhu dish okubabayo kakhulu futhi ukunambitheka engavamile iba ithanga. Amalungiselelo ebusika, wenza ngale ndlela ingasetshenziswa hhayi kuphela njengenhlangano appetizer, kodwa futhi njengoba i dish ezimele yesibili. Kuyinto okunomsoco kakhulu, has iphunga elimnandi futhi ukubukeka mnandi.
Nakhu yena - ithanga. Amalungiselelo ebusika, zokupheka zazo ethulwa ukunakwa kwakho, kulula ukwenza futhi ukunambitheka omuhle. Lungisa la izitsha ngekusasa - futhi zonke ebusika bale yasendlini, ukudla kwakhe ewusizo futhi unempilo.
Strudel ne apula. Recipe ekhaya.